Articles | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ahoana no hanavahana tantely amin'ny mpihinam-bitsika?
Na dia tsy miraharaha ny vatomamy aza ny olona iray, ka mahatsapa ny tombony azo avy amin'ny tantely, dia mividy siny ho an'ny tenany manokana indraindray mba hividy ny batony sy hanatsara ny vatany. Saingy vitsy no mahalala fa misy karazany iray hafa amin'io vokatra mahagaga mahasoa io. Izy io dia momba ny tantely mani-tantely. Eny, eny, ity no tsindrin-tsakafo izay tian'ny olona rehetra.
Toe-karena mahasoa amin'ny lungfish
Medunitsa - iray amin'ireo zavamaniry vitsivitsy, ny toetra mahasoa azy ireo dia voamarina amin'ny fanafody tsy manam-petra sy manam-pahefana. Nefa ankoatra izany, medunitsa dia ampiasaina amin'ny sakafo ihany koa, izay mahatonga azy ho mponina marefo amin'ny fandriana sy zaridaina. Ny firafitry ny simika amin'ny lungwort ao amin'ny firenentsika dia ny mahita lungwort ao amin'ny tontolo voajanahary dia tsotra, saingy ny mpamboly dia manaparitaka izany amin'ny sehatr'izy ireo manokana.
Ny fomba hitomboan'ny lungfish, ny fitsipiky ny fambolena sy ny fikarakarana voninkazo
Ny fandaminana ny faritany akaikin'ny dacha dia matetika manome planta isan-karazany. Mampalahelo fa ny ankamaroan'izy ireo dia ny fitiavan'ny masoandro ary marefo ao anaty alokaloka. Ahoana anefa raha ao amin'ny alokaloka ny ankamaroan'ny tranonkala? Tsotra ny valiny - mamolavola lungwort. Ny voninkazo dia akanjo tsara tarehy amin'ny zaridaina rehetra, ary ny fahatsorana amin'ny fikarakarana dia hanome fahafahana anao tsy handany fotoana betsaka amin'ity zavamaniry ity.
Ny volom-borona volom-borona volom-borona manana loko marevaka marevaka dia ho toy ny fanaka mahatalanjona amin'ny trano rehetra. Ny toeram-pambolena dia tsy dia mendri-piderana loatra amin'ny fikarakarana, ary tsy mitaky fonenana manokana momba ny toeram-ponenana, ka mora ny mitombo ao an-trano. Description Vallota, na koa hoe antsoina hoe "afo lily", dia orinasa tropikaly mavomavo amin'ny fianakaviana Amaryllid, izay trano any Afrika Atsimo.
Nahoana ny tany no rakotra fotsy fotsy, misy bobongolo, miongana ary fofona tsy mahafinaritra avy amin'ny vilany
Ny mpamokatra voninkazo atsy ho atsy dia manoloana ny olana momba ny endriky ny sarin-tsofa marefo ao anaty vilany, ary matetika dia miteraka fahatsapana tebiteby ho an'ny zavamaniry ao anaty trano izany. Raha ny marina, io toetran'ny tany io dia tsy olana goavana izay mety hanimba tanteraka ilay orinasa, fa ny loza aterany dia mampidi-doza.
Ahoana ny fomba hanatsahana ny lozika amin'ny karaoty amin'ny Korean amin'ny ririnina
Ny sakafo Koreana dia mihisatra tsikelikely eo amin'ny latabatra, ary mihena tsikelikely ny toetrany. Androany, tapas dia azo jerena ao amin'ny fivarotana manokana, sy amin'ny toeram-pivarotana, ary amin'ny tsenan'ny sakafo. Ary sira salate tsara dia mahafinaritra lehibe, ary miaraka miaraka amin'ny ovy nohanina na mafana dia mamadika sakafo be voninahitra.
Fomba ahoana no hanakanana ny kôpôtianina mena amin'ny ririnina?
Amin'ny ririnina, ny vatana dia tsy ampy vitaminina, ary mba hamenoana ny famatsian-dry zareo, dia faly isika manokatra banga amin'ny lohataona: compotes, sokatra, jams, voatokana, jelly. Mandritra izany fotoana izany, amin'ny 20% ny vitaminina C dia mbola hitoetra hatrany, ary ny fikarakarana ny tsiro compote dia tsy mihetsika loatra amin'ny hafanana ary mitahiry vitamina tsara kokoa, ankoatra izay, ny fiterahana amin'ny fotoana fohy dia mikendry ny hanaisotra ny rivotra avy amin'ny vokatra ary manimba ny rafi-pandaminana izay manamafy ny vitamina.
Frantsay mampihetsiketsika barbezie
Efa ela no nahazoana ny fanajana ireo tantsaha Rosiana ny trondro frantsay frantsay antitra. Ary tsy mahagaga, satria tsy dia mendri-piderana loatra ilay vorona vahiny, dia mazoto be dia be amin'ny rivotra henjana ary manome hena tena mahavariana. Mianatra momba izany bebe kokoa isika. Ny tantaram-piraisana ara-tantara Chickens Barbaze dia nipoitra taonjato maro lasa izay tany amin'ny tanàna Frantsay kely Barbezieux.
Potato "Tuleyevsky": ny toetra, ny fambolena agrotechnics
Ny Potatoes "Tuleyevsky" - karazana-manan-danja indrindra eo amin'ny sehatry ny mpandraharaha sy ny tokantrano tsy miankina. Tena mamokatra sy mora diovina izany. Ny fakan-dity dia tsy mitaky fepetra manokana ho an'ny fambolena, fa tsy hanimba ny fianarana ny karazam-bazana rehetra mialoha. Tantaran'ny fambolena Ny karazana dia natolotry ny mpamboly ny Kemerovo Research Institute (Siberia).
Ahoana ny fomba hanapahana tsara ny gazy?
Ny ahitra marevaka eo amin'ny jiro mamiratra dia idealy izay maniry ny hahatratra ny toeram-ponenany sy ny dacha maro. Na dia izany aza, tsy ny rehetra no afaka miatrika ny "volo", ary ny antony mahatonga ny tsy fahombiazana dia matetika dia mitoetra ao amin'ny fisafidianana tsy misy fiaramanidina mozika. Ny endriky ny mozika maoderina maoderina Manana vondrona maromaro, izay natao hiasa any amin'ny faritra samihafa.
Dracaena deremskaya: ireo toetra ilaina sy ny endriky ny fikarakarana tokantrano
Dracaena trano fanatobiana fananana nampiasaina tsara ho an'ny trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny. Ny iray amin'ireo karazan-javamaniry mahomby ao an-tokantrano, dia dracaena tantara an-tsehatra, izay malaza amin'ny tsy fisehony sy ny fahafahany manadio ny rivotra ao amin'ny efitrano, mamonjy azy amin'ny poizina sy ny vatana.
Karazana sela fanangonam-bokatra
Amin'izao fotoana izao, ny seleria dia ampiasaina amin'ny fampiasana tsy an-kihatra fotsiny, fa koa ny kolontsain'ny sakafo. Ny zavamaniry dia afaka manasitrana ny vatana amin'ny zavatra manan-danja maro, ary mahafa-po tanteraka ny hanoanana. Mandritra izany fotoana izany, ny kalitaon'ny vokatra dia miankina amin'ny fikarakarana ny teknikam-pambolena sy ny safidy amin'ity fotoana tsara indrindra ity.
Azo atao ve ny maniry sela ao an-trano amin'ny varavarankely?
Seleri dia iray amin'ireo legioma mahasoa indrindra, ary tsy mendri-piderana amin'ny fikarakarana. Mora ny mitombo ao an-trano ao anaty vilany. Ahoana ny fomba hanaovana izany marina, vakiana etsy ambany. Karazana sy famaritana ny seleria Misy karazana selera telo: Root - hatramin'ny taom-pamokarana voalohany, dia mamolavola faran'izay fototarazo iray mitentina 1,5 kg.
Karazana kobam-bary mainty hoditra: tombony sy fahasimbana amin'ny vatan'olombelona
Ny masomboly kôkôsy mainty sy kobam-bary avy amin'izy ireo, izay anisan'ny zava-manitra sy fanafody tranainy indrindra, dia mangataka amin'ny teny gastronomika sy amin'ny tanjona medikaly mavitrika ary na aiza na aiza. Vakio bebe kokoa momba ity vokatra marobe ity mamaky bebe kokoa ao amin'ny lahatsoratra. Famaritana momba ny voangory mainty hoditra Small, ny masomboly mainty eo amin'io kolontsaina io dia mibahana am-pandaminana ny fofom-pahatsiarovana tsy hay hadinoina, manana tsiro bitika bitika izy ireo ary manana tsiron-tsakafo kely ihany koa.
Ny fahasamihafana eo amin'ny anise sy anise
Anise sy anise kintana dia zava-manitra izay ampiasaina betsaka amin'ny sakafo, fanafody sy cosmetology. Momba ny toetoetran'ny zava-manan'aina sy ny voka-dratsiny, ny tombontsoa sy ny fikajiana fampiasana, vakio etsy ambany. Ny famaritana ny badyan Badyan, dia ny karazana voninkazo, ny fianakaviana Limonnikovyh. Ny hazo dia hazo matevina, mahatratra ha 10 metatra.
Karazana fampiasana selera nandritra ny fitondrana vohoka
Ny selery dia ampahany manan-danja amin'ny sakafo ara-pahasalamana miaraka amin'ny sakafo mahavelona. Na dia izany aza, tsy ny zava-drehetra dia mazava tsara - ny tombony amin'ny vokatra mandritra ny fitondrana vohoka dia voatery. Raha mahasoa ny vehivavy bevohoka ny legioma dia vakio amin'ny lahatsoratra manaraka. Ny firafitry ny seleria Ao amin'ny sakafo dia mandany ny fakany sy ny dian'ny selera. Miorina ny singa simika ao aminy.
Fampirimina mampifaly amin'ny toerana rehetra miaraka amin'ny mpamokatra
Ireo mpamokatra gazolinina dia tena malaza eo amin'ireo mpiserasera any amin'ny faritra tsy misy famatsiana herinaratra herinaratra. Raha misy trano fialofana any an-tanàn-dehibe na any an-toerana dia misy ny tsy fandriam-pahefana tsy tapaka, ny vahaolana dia ny hampiasa solosaina solika. Ny fitaovana mandritra ny ora maromaro dia manome fe-potoana mitohy, ny zavatra lehibe indrindra dia ny misafidy ny safidy tsara indrindra arakaraka ny zavatra ilaina.
Planeta mahagaga antsoina hoe begonia Diadem - famaritana, endri-pikarakarana sy famokarana
Begonia Diadem dia zavamaniry maharitra isan-taona izay mitovy amin'ny hazo mahafinaritra miaraka amin'ny ravinkazo mahagaga, izay nahatonga ity karazana ity ho anarany, satria ny hatsaran-tarehiny dia handravona ny efitrano anatiny na eo an-jaridaina. Amin'ity lahatsoratra ity dia hianatra momba ireo toetra mampiavaka ny karazany avy amin'ny karazana begonias hafa.
Ahoana no ahafahana mamboly voaloboka mavo ary manome azy fikarakarana tsara ao an-trano? Sary sy famaritana ny karazana
Misy anton-javatra maro toy izany ao Begonias, na dia ny mpamboly za-draharaha aza indraindray dia sahiran-tsaina amin'ny fomba fijery. Ny lahatsoratra dia hiresaka momba ny begonias mavo. Nanomana fanazavana izahay mikasika ireo voninkazo ireo, ny fomba hikarakarana azy ireo, hampitomboina, inona ny nuances sy ny sombin-javatra izay ilaina ho an'ny mpamboly amin'ny zavamaniry ao anaty trano.
Torolàlana sy torohevitra azo tsapain-tanana ho an'ny gardenia mitombo avy amin'ny voa ao an-trano
Gardenia dia zavamaniry tropikaly izay tsy manana laza tsara ho an'ny fambolena ao an-trano. Ny fomba fambolena fototra ho an'ny gardenia dia ny voa sy ny grefy. Vantany vao voamarikao fa tsy dia misy fanantenana loatra ny ao an-trano. Ny fambolena ny fiompiana zaridaina dia tena miasa mafy, satria ity zavamaniry ity dia manana toetra mihetsiketsika.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Articles